चाइना अफ-रोड एक्सेसरीज, अटो रिफिटिंग पार्ट्स निर्माता, बाहिरी उत्पादन आपूर्तिकर्ता - सलमान
Ningbo सलमान 10 भन्दा बढी वर्ष को लागि अफ-रोड सामान को विकास र उत्पादन को लागी समर्पित गरिएको छ। हामी धेरै प्रसिद्ध कम्पनीहरूको लागि OEM र ODM सेवाहरू प्रदान गर्दछौं।
हाम्रा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने उत्पादनहरूमा फार्म ज्याक, स्न्याच ब्लक, विन्च फेयरलिड, आदि समावेश छन्। हामीले सबै प्रकारका अफ-रोड सामानहरूका लागि CE प्रमाणपत्रहरू र AS/NZS प्रमाणपत्रहरू पाएका छौं, र तिनीहरू युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्डमा निर्यात गरिन्छन्। , मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया र अन्य क्षेत्रहरू।
Ningbo Salman ले ग्राहकका आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ, व्यक्तिगत उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू र सेवाहरू प्रदान गर्दछ, र निरन्तर ग्राहकहरूको लागि व्यापार मूल्य सुधार गर्दछ। हाम्रो अफ-रोडसामानहरूर अन्य उत्पादनहरु घरेलू र विदेशी बजारहरु द्वारा राम्रोसँग प्राप्त भएको छ।
16mm सफ्ट शैकल
8T एल्युमिनियम व्हील स्न्याच ब्लक
10 टन स्न्याच रिंग
12000lbs 4-वे रोलर फेयरलीड
१० टन स्टिल व्हील स्न्याच ब्लक
Ningbo Salman International Trade Co., Ltd जसको दर्ता पूँजी RMB1.88 मिलियन युआन छ। यो अटो एक्सेसरीज, हाइड्रोलिक मेसिनरी पार्ट्स, अफ-रोड एक्सेसरीज र बाहिरी उत्पादनहरू जस्ता उत्पादनहरू अनुसन्धान र विकास गर्नमा विशेषज्ञता राखेको व्यापारिक कम्पनी र उत्पादन कारखाना हो।
स्कल विन्च हकिल
हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत छ! हाम्रा उत्पादनहरू वा मूल्यसूचीको बारेमा सोधपुछको लागि, कृपया हामीलाई तपाईंको ईमेल छोड्नुहोस् र हामी 24 घण्टा भित्र सम्पर्कमा हुनेछौं।
हड्डीहरू प्रयोग गर्ने विधिहरू र सावधानीहरू के हुन्?
शक्कलको विधि र सावधानीहरू प्रयोग गर्नुहोस्: